China Cultural Stone-VNS-018CB fanamboarana sy ozinina | LONGSHAN
Anaran-javatra:Takelaka mainty Panel manify
Lanja: 25KG / M2
1. 4 strips io, ny halavany dia 40cm.interlock 5cm .Ny endrika mahazatra dia Z sy S .Ny hateviny dia 8-15MM, maivana ny hazavana, noho izany dia mora kokoa ny mitondra sy ny fananganana.
2. Ny tontonana iray manontolo dia namboarin'ireo akora vita amin'ny vato. Ny hamafiny, ny hakitroka ary ny fanoherana ny fitafiana dia ny taila tanimanga tsy azo oharina ary nantsoina hoe fitaovana haingon-trano maitso izy io noho ny atiny ambany amin'ny radioaction raha ampitahaina amin'ny taham-pahamarinan'ny The International Commission on Radiological Protection.
3. Ny velarana dia mitazona ny firavaka sy ny loko voajanahary tsy manam-paharoa aorian'ny famokarana, ny fanapahana ary ny fifamatorana.
Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany manomboka amin'ny trano ka hatramin'ny ivelany. Fanamafisana ny lamosina any an-dakozia, ny afon'afo, ny barbecue eny ivelany na ny rindrin'ny mpamboly miaraka amin'ireo takelaka manify ireo.
2. Azafady azafady azafady fa ny loko dia mety ho hafa kely noho ny fahasamihafana eo amin'ny efijery sy ny hazavana.
Tsy misy MOQ, orinasa izahay, azonao atao ny manafatra izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
Teo aloha: Vato ara-kolontsaina-VNS-014XCB
Manaraka: Kolontsaina Vato-VNS-1120MGPB